သငျသညျအာကာသသားငယ်များအမျိုးမျိုးတို့ကိုအဘို့အမြူနီစီပယ်ရတဲ့နေသောယောက်ျားတွေတစ်ဦးဖြစ်ကြ၏လျှင်,ဒါမှမဟုတ်သင်အရူးအက်ပ်ကိုယူရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေကြသူသူငယ်အမျိုးမျိုးတို့နှင့်အတူအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်၏လျှင်သူတို့ကိုသုံ့ပန်းဖန်ဆင်းသောမိကျောင်းအမျိုးမျိုး၏အစိမ်းရောင်သုက်ပိုး,ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာဆိုက်သို့ရောက်ကြ၏။ ငါတို့သည်သင်တို့အင်တာနက်ပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံများထဲကတစ်ခုကမ်းလှမ်းတဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာကစားနိုင်သမျှအခမဲ့ဂြိုလ်သားလိင်ဂိမ်းရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ဝဘ်ပေါ်မှာပျော်စရာအချိန်များအတွက်လိုအပ်သမျှနှင့်အတူလာ။, သင္၏ဘေရာက္ဇာတြင္တိုက္႐ိုက္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ကိရိယာမ်ား၊အန္းဒ႐ြိဳက္ႏွင့္အိုင္အိုဒင္းတို႔တြင္လည္ပတ္ေနေသာမိုဘိုင္းကိရိယာမ်ားအပါအဝင္သင္၏ဘေရာက္ဇာတြင္တိုက္႐ိုက္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ကိရိယာအားလံုးပါဝင္ပါသည္။ ဒုတိယအ,ဤဂိမ်းအသစ်ပိုကောင်းဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်နှငျ့သငျအမြားဆုံးပြင်းထန်သောနှင့်စွဲငြိဖွယ်ရာဂိမ်းအတွေ့အကြုံများထဲကတစ်ခုကမ်းလှမ်းရန်သွားနေသောအပူဆုံးစိတ်ကြိုက်အင်္ဂါရပ်အချို့နှင့်အတူ။ သင်တို့သည်လည်းညစ်ညမ်းဂိမ်း၏ဤမျိုးဆက်သစ်တပ်ဆင်ထားကြောင်းပိုမိုရှုပ်ထွေးဂိမ်းအင်ဂျင်မှတဆင့်,အရေးယူကျော်ထိန်းချုပ်မှုအများကြီးရပါလိမ့်မယ်။
ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းများကိုပူဇော်သောပေါ်မှာဆိုက်ကိုသင်ပျော်စရာအချိန်များအတွက်လိုအပ်သမျှသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူကြွလာတော်မူ၏။ ထိုကဲ့သို့သောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကြည့်ရှုခြင်းနည်းလမ်းများနှင့်ဆာဗာများအဖြစ်အားလုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုကိရိယာများအပြင်,အခမဲ့ဂိမ်းနောက်ကျဘို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်,ငါတို့သည်လည်းဆိုက်အပေါ်အချို့သောအသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်။ သငျသညျကြှနျုပျတို့၏အသိုင်းအဝုိင်းအပေါငျးတို့သကစားသမားများနှင့်အတူဂိမ်းအကြောင်းဆွေးနွေးရန်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ တဖန်သင်တို့ပင်မှတ်ပုံတင်မရှိဘဲဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြုနိုင်သည်။ အရာအားလုံးကစားနှင့်ရပ်ရွာနှင့်အတူအပြန်အလှန်ချင်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဧည့်သည်များအဘို့ငါတို့ဆိုက်ပေါ်တွင်ဖွင့်လှစ်သည်။, ကျနော်တို့ဝဘ်ပေါ်တွင်အများဆုံးညစ်ညမ်းအတွေ့အကြုံများကိုတဦးပူဇော်ချင်သောကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ပွုပါ။
အခါတပါးမိကျောင်းအကူအညီမဲ့လူ့သားငယ်များ၏အားသာချက်ကိုယူပြီးရာတှငျအထွတ်အထိပ်ညစ်ညမ်းဂိမ်းမှကြွလာ,ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးလိင်ဃအချို့နှင့်အတူလာ. သူတို့ကသင်မြင်ရပါလိမ့်မည်ကြောင်းစည်းနှောင်ကြိုးနှင့်အတင်းအကျပ်စှဲအချို့နှင့်အတူလာမယ့်ကြောင့်ဤဂိမ်းကိုအလွယ်တကူညစ်ညမ်း၏ဘီအမ်အိပ်အမျိုးအစားတွင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ကလေး၏အော်သံနှင့်အော်ဟစ်သံများသည်သင်၏ကျောရိုးကိုလှုပ်ခါသွားစေပြီးဤခေါင်းစဉ်သည်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ကြောင်းကစားသမားအားလုံးကိုရပ်ကွက်ရမည်။ သူတို့ကအစွန်းရောက်အရေးယူမှုနှင့်အတူလာသင်အပိုကြမ်းတမ်းအရေးယူသို့မဟုတျလြှငျ,သင်စွန့်စားနည်းနည်းထိုးစစ်တွေ့စေခြင်းငှါ,.
အခြားတစ်ဖက်တွင်,ငါတို့ရှိသမျှသည်အာကာသသားငယ်များနှင့်ပတ်သက်. သငျသညျဝေးကွာသောဂြိုလ်ပေါ်၌အမျိုးအစားအသစ်ကိုရှာဖွေနေ,စွန့်စားမှုအမျိုးမျိုးအပေါ်ဝင်သောအဖွဲ့အစည်းသူရဲကောင်းအဖြစ်ကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်တို့သည်လည်းလမ်းတစ်လျှောက်ဟေးဒီးစုဆောင်းနေချိန်မှာသင်ကဖြေရှင်းနှင့်သင့်ဇာတ်ကောင်တက်အဆင့်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ပြီးတော့ရုပ်ပြောင်လိင်ဂိမ်းရှိပါတယ်။ ဂိမ်းများ၏အာကာသလိင်စုဆောင်းမှု၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုအချို့သောကြယ်ပွင့်စစ်ပွဲများညစ်ညမ်းဂိမ်းမပါဘဲဖြစ်ပါ့မလား? ကျနော်တို့သင်ကြယ်ပွင့်စစ်ပွဲများဂိမ်းအားလုံး၏ထိတ်လန့်၏သားငယ်များကိုထိုးဖောက်နိုင်သည့်အတွက်ဂိမ်းများရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်တစ်ခုမှာကြီးမားသောစုဆောင်းမှုနှင့်ကောင်းမွန်စွာဖွဲ့စည်းထားသောစနစ်မှတပါး၊ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည့်စုံသောသမ္မာသတိကိုပူဇော်သက္ကာပြုကြသည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်သင်ဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကိုသိနိုငျသညျ,ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတောင်းဘယ်တော့မှနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစဉ်အဆက်သင်၏အိုင်ပီလိပ်စာသိလိမ့်မည်သည့်မှတဆင့်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်. သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဂိမ်းနေချိန်မှာလုံးဝအမည်မသိနေထိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့မှတ်ချက်အပိုင်းများမှတဆင့်သို့မဟုတ်ဖိုရမ်အပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏အခြားကစားသမားများနှင့်အတူမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ဝေမျှမအကြံပြုပါသည်။ နှင့်လည်း,သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဖုန်းပေါ်မှာဤဂိမ်းကစားနေစဉ်ဖမ်းမိမရကြဘူးကြောင်းသေချာပါစေ., မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်၊သို့သော်ဤဂိမ်းကစားနေစဉ်သင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးရှုံးရမည့်အဆင့်သို့မဟုတ်နှစ်မြှုပ်ခြင်းကိုသင်မြင်လိမ့်မည်၊အစစ်အမှန်ကမ္ဘာအကြောင်းကိုမေ့သွားရန်ဤမျှလွယ်ကူလိမ့်မည်ဟုသင်နားလည်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်,သင်တစ်ယောက်တည်းအိမ်ပြန်နေစဉ်တံခါးပိတ်နှင့်အတူဤဂိမ်းကစားရန်သေချာပါစေ.